Dwom 65—Kɔ W’anim! | Kristofo Dwom
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cibemba Cinyanja Croatian Damara Dangme Danish Douala Drehu Dutch English Ewe Fijian Fon French Ga German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Karen (S'gaw) Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Mambwe-Lungu Mapudungun Mauritian Creole Myanmar Ndau Ndebele Ngangela Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Telugu Thai Tigrinya Tojolabal Tok Pisin Tshiluba Turkish Twi Ukrainian Uruund Wallisian Wolaita Yapese Yoruba Zulu
1. Kɔ w’a-nim ko-si sɛ wo ho bɛ-ko-kwaw!
Fa n-si ka a-sɛm; men-su-ro nni-pa bia-ra.
Fa a-w’rɛ-kye-kye ma wɔn a wɔ-di yaw;
Nyan-ko-pɔn be-hyi-ra wo.
O-bia-ra be-tu-mi a-yɛ bi.
Ye-su yɛɛ a-sɛm-pa-ka yi bi.
Yɛn Nyan-ko-pɔn ne A-w’ra-de taa yɛ’a-kyi.
Ye-di no-kwa-re ma wɔn
2. Kɔ w’a-nim fa a-hoɔ-den ka a-sɛm no.
Ka n-kwa-gye a-sɛm-pa kye-rɛ a-ni-gye-fo.
Ye-ho-wa yɛ he-ne; yɛ-bɛ-kam-fo no.
Yɛ-nam a-sɛm-pa no so.
A-tam-fo pɛ sɛ yɛn ko-ma tu.
Nan-so kɔ w’a-nim daa; ɛ-mmɔ hu.
Ye-ho-wa bɛ-boa wo ɔ-haw nyi-naa mu.
Kɔ so ky’rɛ-ky’rɛ daa nyi-naa.
3. Kɔ w’a-nim na yɛ san-kɔ-hwɛ b’re nyi-naa.
A-dwu-ma no dɔɔ-so,
en-ti fa w’a-hoɔ-den boa.
Ma Ye-ho-wa hon-hom n-kye-rɛ wo kwan.
Na w’a-ni be-gye ɛn-nɛ.
Dɔ nni-pa wu-nya wɔn no nyi-naa.
Ma wo nky’rɛ-ky’rɛ no nka wɔn ko-ma.
Boa wɔn nyi-naa ma wɔn-kɔ wɔn a-nim daa.
No-kwa-re hann bɛ-hye-rɛn.
(Hwɛ Filip. 1:27; 3:16; Heb. 10:39 nso.)
Kɔ W’anim! (Dwom 65)